ဥပဒေဘောင်အပြင်ဖက်က အမုန်းတရားဟောကြားမှုတွေ…ဘာသာရေး/လူမျိုး ရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို…ဥပဒေနဲ့အညီ ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားပေးရပါတယ်….အရေးယူပေးရပါမယ်… | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဥပဒေဘောင်အပြင်ဖက်က အမုန်းတရားဟောကြားမှုတွေ…ဘာသာရေး/လူမျိုး ရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို…ဥပဒေနဲ့အညီ ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားပေးရပါတယ်….အရေးယူပေးရပါမယ်…
ဥပဒေဘောင်အပြင်ဖက်က အမုန်းတရားဟောကြားမှုတွေ…ဘာသာရေး/လူမျိုး ရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို…ဥပဒေနဲ့အညီ ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားပေးရပါတယ်….အရေးယူပေးရပါမယ်…
လူမျိုးခွဲခြားမှုဘာဖြစ်ရေးနေ့ဆိုလား လဲလုပ်လိုက်တာဘဲ….
ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး အခန်းအနားဆိုလား…..လုပ်လိုက်တာဘဲ..
ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံဆိုလား…လုပ်လိုက်တာဘဲ….
စကားကြီး စကားကျယ်တွေပြောပြီး…ပြီးသွားကြတာဘဲ…..
လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ထုတ်မှု…(ကျွန်တော်တော့) ဘာတခုမှ
လူထုက တကယ်ကို ငြိမ်းချမ်းချင်ပါတယ်….လူ လက်တဆုပ်စာလောက်ကဘဲ
ပြသနာတွေကို စဖန်တီးတဲ့နေရာတွေကို အုပ်မိ စီးမိပြီး…ဖြေရှင်းလိုက်ရင်….
အေးဆေး တည်ငြိမ်မှုကို ရဖို့…၉၅% သေချာပါတယ်….
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှာ….လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ်နီးပါးက…ပဋိပက္ခများတားဆီးကာ ကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ပြီး လုပ်ခဲ့ကြဘူးပါတယ်….
ဗြဟ္မစိုရ်အသင်းကြီးရဲ့ အဓိကပံ့ပိုးကူညီမှု….အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်များရဲ့ အင်တိုက်အားတိုက်လှုတ်ရှားမှု….မန္တလေး…လေးပြင်လေးရပ်က ရဟန်း
သံဃာတော်များရဲ့ ကြီးကြပ်မှု….ဘာသာပေါင်းစုံမှ လူငယ်များ လူကြီးများနဲ့
ငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားတဲ့ တက်ကြွလှုတ်ရှားသူ နိုင်ငံရေးသမားများ…လူမှုရေး
အစိုးရက…ဗြဟ္မစိုရ်အသင်းကြီးကို ဖိအားမပေးခင်အချိန်အထိ…
အစိုးရက…အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဖိအားမပေးခင်အချိန်အထိ…
မန္တလေးမြို့ ကြီး…လောင်မီးကျမသွားအောင်…မသူတော်တွေလက်က…အကြိမ်ကြိမ် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်….
နယ်မြေအလိုက်…တာဝန်ခံတွေခန့်ထား…ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းတွေ ဖြန့်ချထား
တယ်…ရုံးမှာ…တာဝန်ခံ(ဘာသာပေါင်းစုံ)အဖွဲ့ အရန်သင့် ရုံးထိုင်ထားတယ်….
အစီးအနင်း..ကားတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ စီစဉ်ထားတယ်….
ပြသနာတခု အသံကြားတာနဲ့ ရုံးကို သတင်းပို့…ရုံးတာဝန်ခံကသက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအသီးသီးကို သတင်းပို့…ဖြစ်လာတဲ့ပြသနာကို လိုအပ်သလို အဆင့်လိုက် အဆင့်လိုက် ဥပဒေနဲ့ အညီ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းလိုက်တာ…ပြသနာ အားလုံး ပြေလည်သွားခဲ့တာချည်းပါဘဲ….
သက်ဆိုင်ရာ ရဲ…အထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုပါ…တပါထဲခေါ်သွားပြီး…ပြသနာ ကို တထိုင်ထဲ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်….
ဂဠုန်နီဆရာတော်ဦးကာဝိယ…အာရှအလင်းရောင်ဆရာတော်…အပါအဝင်… ဆရာတော်သံဃာတော်တွေဟာ…လမ်းမတွေပေါ်ဆင်းပြီး…ညဉ့်နက် သန်းခေါင် အထိ…သွေးဆူနေတဲ့လူအုပ်တွေကို ရှင်းလင်းဖျောင်းဖျတဲ့အလုပ်တွေကို…လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်….
ပြသနာ အများစုဟာ…သံသယ/မယုံကြည်မှုတွေကနေ မြစ်ဖျားခံလာလေ့ရှိပါ တယ်….အဲ့ဒီ သံသယတွေ/မယုံကြည်မှုတွေကို…အစပျိုးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်
ရင်…တဖက်နဲ့ တဖက် ပဋိပက္ခများလဲမဖြစ်….နစ်နာဆုံရှုံးမှုများလဲမဖြစ်…ဥပဒေ
ကြောင်းအရ အရေးယူမှုများလဲ မဖြစ်လာနိုင်တော့ပါဘူး….
အသွင်သဏ္ဍာန်ကွဲပြားနေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ…မယုံကြည်မှုတွေ…သံသယ တွေဆိုတာ ရှိနေမှာ မလွဲပါဘူး…..ဒီလို ရှိနေတဲ့ သံသယတွေ…မယုံကြည်မှုတွေ ကို ဖြေဖျောက်ပေးဖို့ တဖက်အဖွဲ့ အစည်းမှာလဲ တာဝန်ရှိပါတယ်….
တဖက်အဖွဲ့အစည်းက နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ဖြေရှင်းလာမှုကို နားလည်မှုအပြည့်နဲ့
သံသယတွေ မယုံကြည်မှုတွေကို ပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ရော…မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ မှုများကို သတင်းအဖြစ်ထုတ်လွှင့်ပြီးတော့ရော….တိုင်ပြည်ကို ဖျက်စီးဖို့ကြံစည်
ကြိုးစား အားထုတ်နေချိန်ဖြစ်လို့…ပိုပြီး…သတိဝီရိယရှိရမဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါတယ်…
တကယ်တန်းကျတော့…ရဲအပါအဝင်…အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဟာလဲ..
စစ်တပ်ရဲ့ အထက်အမိန့်ကြောင့်သာ…သူတို့ခိုင်းတာ လုပ်နေရပေမဲ့…တည်ငြိမ်
အေးချမ်းတဲ့အခြေအနေကို သူတို့ကိုယ်တိုင်က လိုလား မြတ်နိုးတယ်ဆိုတာကို
၂၀၁၃ခုနှစ်…ဧပြီလ ပတ်ဝန်းကျင်ကအဖြစ်အပျက်များအရ သိသာ ထင်ရှား ပါတယ်…
ပဋိပက္ခများတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဟာ…ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ…အထူးသတင်း တပ်ဖွဲ့ဝင်(SB) တွေနဲ့ ပူးပေါင်း လက်တွဲပြီး ပြသနာပေါင်းများစွာကို ဖြေရှင်းနိုင်
အထူးပြုပြောရမယ်ဆိုရင်….မန္တလေးမြို့ တမြို့လုံးကကျောင်းတွေမှာ…ကလေးငယ်တွေကိုရန်ရှာနေတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟလ ထွက်ပေါ်လာပြီး လန့်ဖြန့်သွားတဲ့အချိန်မှာ….အဆိုပါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ…ပဋိပက္ခတားဆီးရေးအဖွဲ့နဲ့ အတူ…တမြို့လုံးက ကျောင်းတွေ…သတင်းထွက်ပေါ်ရာနေရာတွေကို…ကားတွေ…ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ လိုက်လံရှင်းလင်း တည်ငြိမ်စေခဲ့ပါတယ်….
မန္တလေးမြို့ကနာမည်ကြီး မွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အိမ်မှာ အက်ဆစ်တွေအများကြီးသိုလှောင်ထားပြီး ဘာသာခြားတွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်လို့ ဝီရသူရဲ့ Facebook ကဖွချက်ကြောင့်…လူထုအလန့်တကြားဖြစ်..လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်မှုကိုဆိုရင်…အထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ…ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ…ပဋိပက္ခတားဆီးရေးအဖွဲ့နဲ့ အတူ လက်တွဲ ပူးပေါင်းဖြေရှင်း
နာမည်ကြီး ဆရာတော်တပါးရဲ့ကား….အဖျက်အစီးခံရမှုတခုမှာဆိုရင်….ရဲတပ်ဖွဲ့က အခြေအနေကို…သံဃာတော်များနဲ့အတူထိန်းသိမ်းပေးထားချိန် မှာ..ပဋိပက္ခတားဆီးရေးအဖွဲ့ဝင် မွတ်စလင်တွေက…ထိခိုက်သွားတဲ့ ဆရာတော် ရဲ့ကားကို….ဆရာတော်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်…မူလအခြေအနေထက်ပိုကောင်းသွားအောင်…ကားဘော်ဒီဆရာ….
ဆေးသုတ်ဆရာ…စတေဂါသမား…မှန်တပ်ဆင်သူတွေကိုခေါ်ပြီး….ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းအတွင်းမှာတင်…ညတွင်းချင်းပြီးအောင် ပြင်ဆင်ပေးပြီး…….
ပြသနာကိုအေးချမ်းသွားအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်…ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ လို့ရဲက သတင်းရရှိထားတဲ့ မွတ်စလင်၂ဦးကိုလဲ တရားစွဲဆို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်….
အဲ့ဒီလို…..အစိုးရက ဖန်တီးတဲ့ပြသနာတွေကို…အေးချမ်းသွားအောင် ဖြေရှင်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်…မန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီးအောင်နိုင်သူ ကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲမြင့်က….အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့
နယ်ကို ချက်ချင်းနှုတ်မိန့်နဲ့ ပြောင်ရွှေ့ပစ်ခဲ့ပါတယ်….
ဒီကနေ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြသနာတွေဟာ…ဖြေရှင်းလို့ မရတဲ့ပြသနာတွေ မဟုတ်ပါဘူး…
ဟိုတယ်ကြီးတွေထဲမှာ…ကျင်းပနေယုံနဲ့…ပြုလုပ်နေယုံနဲ့…တော့…ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်သလို…ပြေလည်သွားမှာလဲ မဟုတ်ပါဘူး….
အခြေခံအကျဆုံးအရေးကြီးတာက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဖြစ်ပါတယ်….
ဥပဒေဘောင်အပြင်ဖက်က အမုန်းတရားဟောကြားမှုတွေ…ဘာသာရေး/လူမျိုး
ရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို…ဥပဒေနဲ့အညီ ထိထိရောက်ရောက် ဟန့်တားပေးရပါတယ်….အရေးယူပေးရပါမယ်…
မတူကွဲပြားနေတဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား…အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်ဖို့…တွေ့ဆုံပွဲတွေ…ဆွေးနွေးပွဲတွေ…အပြန်အလှန် လည်ပတ် မှုတွေ…ရှင်းလင်းတင်ပြမှုတွေကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် လုပ်ပေးရပါမယ်…
အမြဲတမ်း Active ဖြစ်နေနိုင်မဲ့..ရုံးခန်းတခန်းဖွင့်လှစ်ပြီး…တစုံတရာ ပြသနာအသံ ကြားတဲ့နေရာတိုင်းကို လူထုယုံကြည်ကိုးစားသူများနဲ့ လိုက်လံ
ဖြေရှင်း..ဖြန်ဖြေပေးနိုင်ရပါမယ်….လိုအပ်လာရင် ဥပဒေနဲ့ အညီ အရေးယူနိုင်ဖို့
ပြသနာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးမှာ…တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့….မြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်း သဟဇာတဖြစ်စွာ နေထိုင်
← အမေရိကန်တွင် အကြမ်းဖက်မှုအား ကာကွယ်သော ဥပဒေ ပြဌာန်းထားပါတယ်…မြန်မာပြည်တွင်းမှ အမတ်ကြီးတို့ ကျူးလွန်သော အချက်သည် (၂) ဖြင့် သက်ဆိုင်နေပြီး (၃) ဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား ဆွမ်းခဲဖွယ် ကပ်လှူ သည်ဟုပြောဆိုခြင်းသည် ဘာသာရေးအရ စကားလုံးသာ ဖြစ်ပြီး ဥပဒေအရ စကားလုံးသည် Giving assistance to organizer for terrorist or terror attack (အကြမ်းဖက်သူအတွက်) စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ပေးသူအား အထောက်ပံ့ ပေးခြင်းလို့သာ ဘာသာပြန်ပါသည်
ကိုဖီအာနန်ကော်မရှင် အကြံပြုချက်တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါ့မလား →